Ukukhumbula iSeshbucking Seve Ballesteros
I-Severiano "Hlala" i-Ballesteros yazisa i-golfo yase-Yurophu xa ivela eSpain iya kwi-world scene eyayineminyaka eyi-19 ngo-1976. Wayebizwa ngokuba yi-European Arnold Palmer , kwaye ikhono lakhe elifutshane lemidlalo kunye nefuthe kwibala legalufu yanceda ukuvuselela iWatch Tour kunye ne- Ryder Cup .
Ubunono, ukucinga kunye nomdlalo omncinci wamagqabantshintshi beempawu zomdlalo weBallesteros. Unokuphosola i-fairway kwi-tee, kodwa ngokusemandleni akhe, akunakuqhathaniswa. Wade wenza u-birdie emva kokudlala kwindawo yokupaka ngexesha lowe-1979 waseBritish Open win.
I-Ballesteros yanqoba amaxesha amaninzi kwiNdwendwe yaseYurophu kwi-career yakhe, kunye neentlanu ezinkulu. Kodwa wahlulwa ngaphambi kwexesha lakhe ngesifo esibulalayo.
Seve Ballesteros ngo-1977. UBrian Morgan / Getty Izithombe
Umhla wokuzalwa: uEpreli 9, 1957
Indawo yokuzalwa: Pedrena, eSpain
Umhla wokufa: ngoMeyi 7, 2011
I-PGA Tour: 9
Uhambo lwaseYurophu: 50
IiMidlalo ezinkulu: 5
I-Ballesteros yanqoba i- British Open ngezihlandlo ezintathu (ngo-1979, 1984 no-1988) kunye ne -Masters kabini (ngo-1980 no-1983).
Amabhaso kunye neMbeko kwiSeve Ballesteros
Seve Ballesteros ufumana iGreen Jacket esuka kwiFuzzy Zoeller emva kokuwina iMasters ka-1980. Bettmann / Getty Izithombe
Ebizwa ngokuba ngumdlali we-European of the Century ngo-2000
Ebizwa ngokuba yiSpeyin Sportsman of the Century ngo-2000
I-European Tour Umdlali wonyaka, 1985, 1988, 1991
Umkhokeli wemali ye-European Tour, 1976, 1977, 1979, 1986, 1988, 1991
Ilungu, iqela leYurophu ye-Cup ye-Ryder, ngo-1979, ngo-1983, ngo-1985, ngo-1987, ngo-1989, ngo-1991, ngo-1993, ngo-1995
I-Captain, iqela laseYurophu, i-1997 Ryder Cup
Iminyaka yokuqala yeBalterteros eGoli
Seve Ballesteros ngowe-1983. UDavid Cannon / Getty Images
UBallesteros wakhulela kwintsapho yegalufu. Abazalwana bakhe abathathu bahamba ngegalufu; umalume, uRamon Sota, wagqiba ngowama-6 kwi-Masters ka-1965. UBallesteros wafunda igalofu kwiminyaka emashumi asixhenxe esebenzisa i-iron-cut 3-iron; ngo-13, wayephumelele iziganeko kunye nokudubula 65.
Waguquka ngo-1974, eneminyaka eli-16 nje ubudala, waza wamphumelela uMqhubi we-Occupational Championship ngaloo nyaka. Ngomnyaka we-1976, wanqoba amaxesha amahlanu kwiNdwendwe yaseYurophu waza wabiza isihloko semali. Wenza izibhozo ezine ku-Arnold Palmer kwiLancome Trophy ukuze athathele; eBritish Open, uneminyaka engama-19 ubudala wamxoshela uJohnny Miller ukugqitywa ngaphambi kokuba ahlalise okwesibili.
Ngethuba elinye lowe-1978, iBallesteros wayinqoba iiveki ezintandathu ezilandelelanayo kumazwekazi ahlukeneyo amathathu. Ngomnyaka we-1979, owokuqala kwiintlanu zakhe ezizukileyo kwii-majors zafika kwiBritish Open. Wawunqoba umdlalo wakhe olandelayo, u-Masters, kodwa akazange avunyelwe ukususela ngo-1980 US Open xa wayephelile ixesha lakhe.
U-Balveteros uyabhiyozela i-putt yokugqibela ekunqobeni kwakhe ngo-1988 eBritish Open. Getty Images
Ukuphikisana nokuphumelela kwahamba kunye neBallesteros. Ngowe-1981, wavotwa kwiqela leYurophu ye-Cup ye-Ryder yokudlala kakhulu eMelika. Emva koko imbambano kunye ne-US PGA Tour malunga nokuzibophelela kokudlala - Seve wayefuna ukudlala ixesha elithile eMelika; I-Tour yathi yonke into-okanye akukho-iholele eBallesteros ehlala eYurophu ixesha elipheleleyo.
I-Ballesteros ibambelele kwiTyelelo laseYurophu kwiminyaka engama-1980, kwaye iholele eYurophu kwimpumelelo yayo yokuqala kwi-Ryder Cup ngaloo minyaka.
Ukususela kwiminyaka yee-1990, ukuqhuba ukuhamba kweBalterteros kwagqithisa. Ukuphumelela kwakhe kokugqibela kwiTyelelo lwaseYurophu kwaba ngowama-1995 kwi-Masters yaseSpeyin. Udlale wadlala ngokuphindaphindiweyo ngokukhawuleza emva koko, ngokukhawuleza ukuyeka igalofu yokukhuphisana emva ko-2003. Wadlala ngokufutshane kwi-Tour Tour ngo-2007 ngaphambi kokumemezela umhlalaphantsi wakhe.
Seve Ballesteros kwiNdebe ye-Ryder
Seve Ballesteros ngexesha le-1989 Ryder Cup. Bob Martin / Getty Izithombe
Kwiimpawu ezisibhozo ze-Cup ye-Ryder, iBallesteros iqulunqwe irekhodi lama-20-12-5. Kwimiba emine kunye nezine , uBallesteros wayedla ngokubambisana kunye noSpain u- Jose Maria Olazabal . "I-Armada yaseSpeyin," njengoko iqela libizwe, liye liba yimpumelelo ehamba phambili kwimbali ye-Ryder Cup, iya ku-11-2-2. Amaphupha amaqela angama-12 afunyenwe aphindwe kabini amanqaku e-Rack Cup ehamba phambili.
Inkqubela ebaluleke kakhulu yaseYurophu yaseYurophu yenzeka ngowe-1987, xa iYurophu inqobe iTquip USA kwiJack Nicklaus ' yaseMirfield Village Golf Club , kunye neNicklaus ekhonza njengomphathi weqela. UBallesteros wanceda ekukholeni elo qela, eliphumelele okokuqala kwihlabathi lase-US.
Ngo-1997, uBallesteros wakhonza njengomphathi weQela yeYurophu kunye ne-Ryder Cup yadlala eValderrama eSpeyin, okokuqala edlalwa kwilizwekazi laseYurophu. Kwaye uSeve wayekhokela lakhe iqela ekuphumeleleni.
Ukugula kweBallesteros kunye nesizathu sokufa
Ekupheleni kuka-2008 uBallesteros wafunyaniswa ukuba ene-tumor, eyasuswa kwiindlela ezininzi zokuhlinzwa. Uphando olongezelelweyo kunye nokunyanga okuqhubekayo kwiminyaka elandelayo, kodwa uBallesteros wabulawa ngumhlaza kunye nemiphumo yakhe ngoMeyi 7, 2011, eneminyaka engama-54.
Seve Ballesteros wathwala umzila ngo-1991. UDavid Cannon / Getty Images
I-Seve Trophy, eyaziswa ngo-2000, yayisiganeko somdlalo we-Cup ye-Ryder eyafaka amaqela afana ne-Continental Europe kunye ne-Great Britain / iIreland. Yacetywa nguBallesteros njengendawo yokuqeqeshwa kweNdebe ye-Ryder. I-trophy yayinomfanekiso omncinci waseBallesteros. I-Seve Trophy idlalwe ngamaxesha asibhozo, ngexesha lokugqibela ngo-2013.
UBallesteros wayeyinkokheli kwinqanaba lokugqibela lama- Masters ka- 1986 ngaphambi kokuba afike emanzini kwisigxina se-15 kwaye ekugqibeleni wadluliselwa ngecala elidumileyo likaJack Nicklaus. Siphelile sesine.
I-Seve 50 izuza i- https: // www. / bernhard-langer-profile-1563699 yirekhodi yezininzi zokunqoba kwi-European Tour. UBernhard Langer unesibini kunye no-42.
"Ndikhangeleka emehlweni abo, gubungela isandla sabo, niphakamise umva wabo, nifune inhlanhla, kodwa ndicinga ukuba, 'Ndiya kukungcwaba.' "- iBallesteros
UTom Kite : "Xa ehamba, kufana nokuba uSeve uqhuba uFerrari kunye nathi sonke seChevrolets."
L eeTrvino : "Isizukulwana ngasinye okanye kunjalo kubakho i-golfer ehamba kangcono kunomnye umntu. Ndiyakholwa uBallesteros ungomnye wabo."
UBen Crenshaw: "Udlala iidlits, andizibonanga ngamaphupha am."